ရိုဟင်ဂျာများရဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းအခြေအနေတွေအရမ်းဆိုးရွားတယ်လို့ Ms. Valerie Amos မှပြောဆို | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ရိုဟင်ဂျာများရဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းအခြေအနေတွေအရမ်းဆိုးရွားတယ်လို့ Ms. Valerie Amos မှပြောဆို
ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းကို ကုလသမဂ္ဂအကြီးအကဲ Ms. Valerie Amos မှကြည့်ရှူစဉ် (ဓါတ်ပုံ – UNOCHA)
ရန်ကုန်။ ။ မြန်မာနိုင်ငံကိုလေးရက်ကြာခရီးရောက်ရှိနေတဲ့ ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာထောက်ပံ့ရေးဌာန ကထိပ်တန်း အရာရှိဖြစ်တဲ့ Ms. Valerie Amos ဟာဒီနေ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ ဒုက္ခသည် စခန်းတွေကိုသွားရောက် ကြည့်ရှူခဲ့ပါတယ်။ Ms. Amos ကမြန်မာနိုင်ငံကမွတ်စလင်ရိုဟင်ဂျာတွေနေရတဲ့ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကအခြေအနေအရမ်းဆိုးနေပြီး၊ အခြေအနေတိုးတက်အောင် လုပ်ရမယ်လို့ ရခိုင် ပြည်နယ်ခရီးစဉ်အပြီးမှာ ဘီဘီစီသတင်းဌာနကိုပြောကြားလိုက် တယ်။
ခြောက်လကျော်အချိန်တွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေမှာ လူပေါင်း ၁၃၅၀၀၀ ကျော်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ် ခဲ့ပြီးတော့ အများစုကရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဘီဘီစီသတင်းဌာနရဲ့သတင်းထောက်ဖြစ်တဲ့ Johah Fisher ကတော့ ရိုဟင်ဂျာများရဲ့ဒုက္ခသည်စခန်း အခြေအနေတွေက ရခိုင်ဒုက္ခသည်စခန်းများယှဉ်လိုက်ရင် အခြေအနေတော်တော်လေး ဆိုးရွားနေတယ် လို့ပြောပါတယ်။ မြေပုံကျွန်းဆွယ်မှာ ရခိုင်ဒုက္ခသည်များအတွက် သစ်လွင်တောက်ပနေတဲ့ မိုးကာတဲတွေမှာကောင်းမွန်တဲ့မိလ္လာစနစ်အပြင် အစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးတွေကို ပုံမှန်ဖြန့်ဖြူးပေးလျက် ရှိပေမယ့် အဲဒီနေရာနဲ့သိပ်မဝေးလှတဲ့အကွာအဝေး၊ မီးလောင်ပြင်ကိုကျော်တဲ့အခါမှာ တော့ ၄၀၀၀ ကျော်ရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေကို မိလ္လာရေတွေ၊ ရွှံ့တွေ၊ အနံ့ဆိုးတွေနဲ့နေရာ မှာစုပြုံထားတယ်လို့ Mr. Fisher ကဆိုပါတယ်။ အဲဒီနေရာမှာစစ်တပ်တွေဝန်းရံထားပြီးတော့ ရိုဟင်ဂျာတွေကိုဘယ်မှသွားဖို့မပေးဘူး လို့ Mr. Fisher ကပြောပါတယ်။
Ms. Amos ကတော့ – အခြေအနေကသေရေးရှင်ရေးတမျှအရေးကြီးနေတယ်။ တစ်ခုခုလုပ်ဖို့လုပ်ကို လုပ်ရမယ်လို့ ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာနဲ့ ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့အဲဒီနေရာကိုဝင်ပြီး အဲဒီလူတွေ အတွက်လုပ်ချင်ပေမယ့် လည်းလုပ်လို့မရဖြစ်နေတယ်။ အဲဒါကြောင့်အခြေအနေကကြောက်စရာ ကောင်းလောက်အောင်ဆိုးရွားနေတယ်လို့ Ms. Amos ကပြောပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ကြိုးပမ်း ဆောင် ရွက်ချက်တွေကို အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကဟန့်တားနေတယ်။ ပြီးတော့ ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာပြဿနာ လည်းရှိတယ်။ ငွေရေးကြေးရေးအခက်အခဲလည်းရှိနေတယ်လို့ Ms. Amos ကထပ်ပြောပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂက ဒေါ်လာ ၆၅ သန်းလိုအပ်နေပေမယ့်လည်း အခုအချိန်ထိ သုံးပုံတစ်ပုံလောက်ဘဲရသေး တယ်လို့သိရပါ တယ်။
Ms. Amos က နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းဒီထက်ပိုပြီးစေတနာထားဖို့နဲ့ မြန်မာအစိုးရကိုပြန်လည်စေ့စပ် ညှိနှိုင်းရေးတွေမှာပါဝင် ကူညီဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ သူမကလူမျိုးနှစ်မျိုးကြားဆက်ဆံရေး တင်းမာ မှု ကတော့အခုအချိန်ထိ အမြင့်ဆုံးစိုးရိမ်ဖွယ် ရာရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ပြဿနာပြေလည်အောင်ဦးဆောင်ပြီးဖြေရှင်းဖို့တာဝန်ရှိတယ်။ အခုကစပြီးအသိုင်း အ၀ိုင်းနှစ်ခုကိုအတူတကွပြန်လည်ဖြစ်သွားရေးအတွက်လုပ်ရမယ်လို့ သူမကပြောပါတယ်။
ဘီဘီစီသတင်းထောက်ကတော့ ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အားလုံးကို ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ ကထိန်းချုပ်ထားပြီး၊ အထောက်အပံ့ပေးအပ်ဖို့တောင်မလွယ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ အသိုင်းအ၀ိုင်းနှစ်ခုရဲ့ကွဲပြားသွားမှုက အခုအခါမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးမှာဖြစ်နေတယ်လို့ Mr. Fisher ကပြောပါတယ်။
This entry was posted on December 6, 2012, in ပြည်တွင်းသတင်း, နိုင်ငံတကာသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ဖြည့်စွက် – ကြားဖြတ်သတင်း – မောင်းတောမြို့ရှိဈေးကို နစကမှမီးရှို့
ရခိုင်ပြည်နယ် လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ ဗြိတိသျှပါလီမန် ဆွေးနွေး →